Induction Ukushisa isiphelo sesiguquli somguqululi we-RF induction heater
Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / Induction Ukufudumeza ukuphela kwesiguquli sokuguqula
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: umntu oguqula izinto, Isithambisi sokuguqula izinto, Ukufudumeza okunamandla okuguqula, ukuphelisa ukufudumeza, Inkqubo ye-RF yokuguqula ubushushu
Ukuchithwa Ukutshisa ukuphela kwe-converter catalytic Kwi-Welding Test ne-Machine Frequency Heating Machine
Injongo Ukufudumeza ukuphela kwenkqubo yokukhutshwa kwesithuthi esiguqukayo sokuguqula izinto. Indibano kufuneka ibanjelwe kubushushu ekujoliswe kubo kwiiyure ezingama-200, ngelixa ibandla lishukunyiswa ukuvavanya amandla e-weld.
Ukushisa 842 - 932 ºF (450-500 ºC)
Izixhobo ze-DW-HF-15kW, inkqubo yokufudumeza ngaphakathi, exhotyiswe ngentloko yomsebenzi ekude equkethe ii-capacitors ezi-5 ze-μF zizonke ze-10 μF kunye nekhoyili yokufudumeza induction eyile yaphuhliswa
ngokukodwa kwesi sicelo.
Inkqubo / yokubalisa Ikhoyili ye-solenoid emise okokujika-mane isetyenziselwa ukufudumeza ukuphela kwenkqubo yokukhupha ngexesha lokuvavanywa kwamandla e-weld. Kuthatha malunga nemizuzu emi-5 ukufikelela kubushushu ekujoliswe kubo
phakathi ko-842 - 932 ºF (450-500 ºC). Eli bushushu ligcinwa iiyure ezingama-200 ngelixa inkqubo inyakaziswa ukulinganisa iimeko zokuqhuba. I-weld iyahlolwa ke ukuba akukho ntanda na.
Iziphumo / Izibonelelo Ukuchaneka kokuhanjiswa kombane kubambe ubushushu obufunekayo ngaphakathi konyamezelo oluqinileyo.